Goobaha Kubada Cagta ee Erayada Online - Codes-ka Bustaha Online-ka ah
Casino Online Xeerarka Bonus > Goobaha Kubadda Cagta ee Ereyga Online
(533 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Khamaarka internetka ee Ermeniya ayaa loo oggol yahay oo si firfircoon u koraya, maaddaama dhammaan noocyada khamaarka ee internetka ay sharci ahaan sharci ahaan hoos imanayaan sharciga khamaarka online ee Armenia. Wadankan waxaa ku yaal labada shirkadood ee internetka ka shaqeeya ee hoos yimaada shatiga gobolka, iyo kuwa shisheeyaha ah.
Ermena waa waddan asal ah oo qadiim ah oo leh midab aan la ilaawi karin oo dabiici ah. Wuxuu isku daraa dabeecad taxadar leh oo ah xididada taariikheed iyo casriga iyo tiknoolajiyada cusub. Dabcan, nasashada Ermena, waa lagama maarmaan in la dhadhamiyo cognac aduunka oo dhan iyo in waqti ku qaato casinos. CasinoToplists waxay go'aansadeen in ay ogaadaan sida arrimuhu dhab ahaantii ula socdaan khamaarista casriga ah ee casriga ah ee online-ka ah iyo casinos terrestrial.
Hawlwadeennada online-ka ah ee aan lahayn shatiga hadda lama mamnuucayo. Waxaad ciyaari kartaa;
Casinos ugu caansan dhulalka caanka ah: "Senator", "Shangri La La;
Ermena waa waddan asal ah oo qadiim ah oo leh midab aan la ilaawi karin oo dabiici ah. Wuxuu isku daraa dabeecad taxadar leh oo ah xididada taariikheed iyo casriga iyo tiknoolajiyada cusub. Dabcan, nasashada Ermena, waa lagama maarmaan in la dhadhamiyo cognac aduunka oo dhan iyo in waqti ku qaato casinos. CasinoToplists waxay go'aansadeen in ay ogaadaan sida arrimuhu dhab ahaantii ula ciyaaraan khamaarista Armenia ee casriga ah, labadaba dhulka iyo casinos internetka.
Xeerarka Armenia ee ku saabsan khamaarka - taariikhda taariikhiga ah
1921 - 1928 Armenia waa qayb ka mid ah ZFSFR ka dibna USSR. Ganacsiga khamaarka ee waddanka waa la oggol yahay. Marka laga soo tago 1928, mamnuucida dhammaan dhulka USSR.
1936 Armenia ee USSR oo ah Jamhuuriyadda midowga. Rabshadaha ka jira magaalada Yerevan iyo bakhtiyaa-nasiib ayaa loo ogolyahay.
1991 Xeerka Liisanka: Qaraarka Golaha Wasiirrada ee Jamhuuriyadda Armenia No. 161. Furitaanka Khadka 1st ee magaalada Yerevan. Ruqsadaha waxaa bixiya Wasaaradda Maaliyadda.
1998 Sharciga "Lacageed Dakhliga" - inuu abaabulo khamaarka waddanka wuxuu noqonayaa mid sahlan oo faa'iido badan leh.
2000 Madaxwaynaha Robert Kocharian ayaa saxiixay Sharciga Tirada 102 "Ku Guuleysiga Ciyaaraha iyo Guryaha Goobta" - Warshadaha khamaarka ayaa horumarinaya oo sii faafaya. Liisanka loogu talagalay furitaanka aqalka ciyaaraha ama hoolka ciyaaraha. Waxaad ka ciyaari kartaa sanadaha 21.
2001 Sharciga "On licensing" - helitaanka liisan wuxuu ku salaysan yahay nidaam adag, khamaaristu waa la dhimay.
2004 Sharciga "Ciyaartoyda leh ciyaaraha guusha iyo khamaarista." Dib u noqoshada joogtada ah ee mashiinka xayeysiinta waa 86% .Daawada cas cas ee caasimada Yerevan waa ugu yaraan 50 km.
2016 - 2017 Wax-ka-beddelidda sharciga oo ku saabsan waajibaadka. Kororka kharashka liisan ee joornaaliyeyaasha onlineka ah waa 5 jeer (waa $ 207,000, waxay ahayd $ 1 million). Ku xigeenka. Wasiirka Maaliyadda ee Armenia Pavel Safaryan ayaa soo bandhigay sharci qabyo ah oo ku saabsan ruqsadda howlaha khamaaraha khamaarka ciyaaraha khamaarka ee khamaarka shisheeye. Xilligan la joogo sharciga waa la tixgelinayaa.
Haddii aad ku ciyaarto casino online ah oo ku yaal Armenia, kaas oo haysta shatiga rasmiga ah ee dalkan - dhaqdhaqaaqaagu waa sharci ahaan.
Waxaad ka ciyaari kartaa goobaha shirkadaha ajnabiga ah, maadaama tan hadda aan la mamnuucin oo aan si dhab ah loola socon. Sidaa darteed, waxaad dooran kartaa casino kasta oo leh liisan rasmi ah oo caalami ah.
Dooro cas cas . Qiimaynta ugu weyn waa kalsoonida, liisanka iyo dib u eegista wanaagsan. Waxaan kugula talineynaa casino, taas oo dhaaftay imtixaanka - si tan loo sameeyo, u fiirso santuuqa midigta.
Waxaan si taxadar leh u bartaa casino . Haddii aad go'aansato inaad u ciyaarto lacag, waa inaad marka hore ogaato xuquuqdaada iyo xeerarkaaga. Dhammaan macluumaadka waxay ku yaalaan goobaha casino ee shabakadda dadweynaha. U fiirso qodobbada soo socda:
Falanqaynta ciyaartoyda shabakada (waa inay noqotaa mid wanaagsan iyo mid xunba, haddii kale waxa ay u badan tahay inuu PR, ama "loo yaqaan" madow "PR;
Shuruudaha gunnooyinka iyo tartanka. Waa maxay xeyndaab, waxaad ka heli kartaa halkan.
Su aasha lacagta . Khariidad kasta oo shisheeye ah waxay bixisaa fursado badan oo loogu talagalay soo galida iyo dib u bixinta lacagaha .Tusaale ahaan, ma jiraan kuwa ku habboon adiga. Ka taxadar lacagta lacagta ciyaaraha la ciyaari karo. Sidoo kale fiiro gaar ah shuruudaha iyo xaaladaha ka-noqoshada guusha (khadadka casinos ee lacagaha waaweyn ee lacagaha lagu wareejiyo qaybo).
Nidaamka daacad u ah macaamilka - gunno, lacag celin iyo wixii la mid ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad marka hore ku ciyaarto habka imtixaanka iyo si taxadar leh u akhri xeerarka ciyaarta. Tani waxay si gaar ah u tahay jumlada kaararka (baccarara, blackjack, iwm.).
Waxaan kuu xusuusineynaa in masaafo dheer oo casino ah had iyo jeer ay ku jirto guusha, laakiin marwalba waxaad haysataa fursad aad ku qaadato wakhti xiiso leh, malaha, waxaad nasiib u yeelan doontaa. Si aad si fiican u xakameyso bangigaaga oo aad u dheereyso xiisaha ciyaarta, akhri qaybteena ku saabsan nidaamyada iyo xeeladaha ciyaaraha.
In Armenia, waxaa jira casinos raaxo ah oo marti ku siinaya dhammaan xaaladaha si ciyaarta raaxo iyo xitaa more. Isbeddelada dhowaan lagu sameeyay sharciga ma saameynin xaaladdan.
Casriga "Senator" waa xaflad xiiso leh oo ay ku yaallaan riwaayad, makhaayad, naadi iyo barxad. Barnaamijka soo bandhigida asalka ah waxaa loogu talagalay martida. Maalin kasta oo sabti ah waxaa jira xaflado. "Senator" waxaad ka ciyaari kartaa roulette, madow, noocyo kala duwan oo ah boorashka iyo mashiinnada.
Shangri La Casino waa kaliya 2 km oo ka jirta magaalooyinka magaalooyinka waaweyn. Xaruntu waxay ilaalinaysaa baraha ugu qadar badan, bixinta adeega heerka heerarka caalamiga ah: daraasiin miisaska ciyaaraha, hoolalka VIP, boqolaal goobo casri ah, saddex bar, maqaayad leh Erman iyo koofurta qaaradda. Dhacdooyinka joogtada ah iyo kaftanka ayaa lagama maarmaan ah.
Intaa waxaa sii kordhaya, hay'adaha ayaa ku walaacsan dhammaan walwalka ciyaartoyda. Mana aha waqti dheer oo ay bilaabeen inay soo muuqdaan marxalado junket. Martida casino waxaa la siiyaa xaddi lacageed oo xadidan oo kaliya maaha wareejinta, hoyga iyo tiro qadar ah, laakiin sidoo kale barnaamijka dalxiis ee hodanka ah.
Ermeniya waxay ku taallaa Bariga Dhexe, ee ku taala Transcaucasia. Wadamada deriska ugu dhow ayaa ah Georgia, Azerbaijan, Turkey, Iran, Nagorno-Karabakh. Caasimaddu waa Yerevan, luuqadda gobolka waa Ermeni, laakiin qof kastaa wuxuu ku hadlaa Ruush si macquul ah.
Goobta Ermena waa mid aad u guuleysatay, raadintii ugu horreysay ee taariikhda dejinta ee dib u celinta muddada 1.9 million sano ka hor. Ereyga weyn ee reer Eriteriya wuxuu ku sugnaa khariidada Herodotus. Qarniyo badan, dhulku waxay qayb ka ahaayeen dawlado kala duwan iyo boqortooyo, laakiin xuduudaheeda casriga ah ee waddanku waxa ay gaadhay qarnigii labaatanaad. 1991 Armenia waxay noqotay waddan madaxbannaan - Jamhuuriyad madaxeed.
Matxafka taariikhda Qaranka ee Armenia . Cinwaanka: 4 Square Republic, Yerevan, Armenia.
Luqadda Ereyga waxaa iska leh kooxo gaar ah oo luqado ah - Paleobalkan. Kaliya noolaanshaha, luuqada la xidhiidha waa Giriig.
Alfabaha Ereyga wuxuu u muuqday ka hor inta aan la adeegsan alfiriga Cyrillic. 406 waxaa abuuray Mesrop Mashtots, waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa adduunka ugu fiican (oo ay wehliyaan Kuuriyaanka iyo Giriiga).
Ermena waa goobaha dhalashada ee guud. In ka badan dagaal oogayaasha 80 ee Byzantium ayaa ahaa Ermeni. Iyo hal tuulo yaryar ayaa siiyay Saraakiisha USSR 2 iyo geesiyaal 11 ee Midowga Soofiyeeti.
Dal kasta oo ka mid ah waddanku wuu ku fiican yahay, oo mid kastaa wuxuu leeyahay wax la arko iyo waxa la jecel yahay. Ermena maahan mid ka reeban arrintan. Mar haddii Jamhuuriyadani mid kasta oo ka mid ah dalxiisayaashu ay ka helayaan xirfad shaqsi: qofku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu u ekaado indho-indheyntiisa, qofna wuxuu doorbidi doonaa dalxiisyada madadaalada ee madadaalada madadaalada, tusaale ahaan, casino.
Guud ahaan, waxaa jira 8 casin ah oo ku yaal Armenia. Kuwani waa xarumo khamaaraya Flamingo, Fircoon, Shangri La La, Senator iyo kuwo kale. Mid kasta oo ka mid ah xarumahan khamaarka, ciyaartoyda waxaa la siiyaa noocyo kala duwan oo ah ciyaaraha khamaarka iyo adeeg tayo sare leh.
Tusaale ahaan, casaankii << Shangri La Yerevan >> waa mid ka mid ah kuwa ugu casriyeeysan ee ku yaala jamhuuriyadda. Goobta lacag-bixinta ah waa $ 100 (pass waxaa la siiyaa dadka kaliya ee ka weyn sanadka 21), laakiin lacagkani ma aha oo kaliya qiimaha tigidhka lagu galo: waxaa lagu beddelay jajab, taas oo markaa la ciyaari karo. Casino waxaa ku jira hoolal cayaar oo dhowr ah, makhaayad raaxo leh ' Michelangelo Hordhac >>, koox CW ah oo loogu talagalay ciyaartoyda VIP. Casino waxaa uu si joogto ah u martigaliyaa bakhtiyaanasiibyo badan iyo tartamo kala duwan oo leh lacago lacag caddaan ah, nidaam kaararka naadiga oo siinaya xaqa dheeraadka ah ee adeega dheeraadka ah (jikada bilaashka ah, albaab bilaash ah, iwm.).
Dhismaha casabiga wuxuu ku yaalaa 10 km ee jidka weyn ee Yerevan-Sevan, oo loo yaqaanno mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee Armenia. Dhulka banaanka dhismaha ee Shangri La waxaa jira meel baabuurta la dhigto oo loogu talagalay baabuurta, loogu talagalay baabuurta 100. Sidaa daraadeed, walwal ku saabsan meesha aad ka baxeyso ciyaartoyda gaadiidka ma aha inay. Waxaad gaari kartaa khaanadda adigoo raacaya taksi.
Haddii aad rabto, waxaad isticmaali kartaa adeegyada hay'adda oo aad dalban kartaa safar gaaban. Waxaa ku jira safar bilaash ah casino (oo ay ku jiraan duulimaadyo dalal kale oo leh fiiso), qol hudheel oo bilaash ah, adeega VIP, 10% celinta khasaaraha maalin kasta iyo wax ka badan.
Bandhiga ciyaaraha ee casaan-galiyaha waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay aasaaska khamaarka "Sun Palace" , oo ku yaal Yerevan. Khadkaan waxaad ku raaxeysan kartaa khamaar ahaan sida roulette, jalaska madow, lafaha, baccarat, Caribbean iyo Ruushka, Ruushka video, waxaa ka jira mashiinada 100, iwm. Qalabka VIP-da qolalka VIP wuxuu u shaqeeyaa taageerayaasha ciyaarta.
Dhamaan lacagaha ku jira khadadkaan waxaa bixiya maamulka hay'adda ee lacagta cayaartu doorato (euro, ruble).
Hase yeeshee, "cason" ayaa ku yaal xuduudda Argagand iyo. Tayrov. Qeybtaan casriga ah ee Armenia, iyo sidoo kale xulashada macaamiisha, doorasho weyn oo madadaalo ah ayaa lagu bixiyaa hoolal ciyaaro oo dhowr ah, meelaha nasashada, bar. Dhawaanna, dhismaha madadaalada, makhaayad cusub ayaa bilaabay inuu shaqeeyo, kaas oo aad dhadhamin kartid suxuunta Ereyga, Iran iyo Ruushka.
Wax kastoo fiicnaan lahaa wuxuu noqon lahaa, laakiin xNUMX ee xiga, casino Armenia wuxuu go'aansaday inuu u wareejiyo aagagga qamaarka gaarka ah ee horey u dejiyey sharciga. Marka laga bilaabo bilowga sanadka cusub, khamaarka waxaa suurta gal ah oo kaliya xudduudaha maamulka ee beelaha Jermuk, Tsakhkadzor iyo Sevan.
Xaaladaha waajibka ah ee goobta khadka casriga ahi waxay ka fogaan doonaan isbitaallada, hay'adaha dawladda, hay'adaha waxbarashada iyo aaladaha dhaqanka iyo taariikhda fogaanta mitirka 500 iyo in ka badan, iyo sidoo kale cabbirka lagu heshiiyay aagagga aagga ciyaaraha khamaarka: casino, waa inay ahaataa mitir labajibbaarre 250, iyo ciyaaraha guusha leh - ma ahan in ka yar mitir labajibbaar 100. Qorshaha isbeddelka goobta casin waa Wasaaradda Maaliyadda ee Ermeniya.
3.0.1 Xeerarka Armenia ee ku saabsan khamaarka - taariikhda taariikhiga ah